ယုန်သား စားလို့ရလား။ ယုန်သားက ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်သလား။ - Hello Sayarwon
ယုန်သားက လူစားနည်းပေမယ့် တော်တော်လေး အာဟာရ များတယ် ဆိုရပါမယ်။ ယုန်သားမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့
ဗီတာမင် B6 တို့ ပြည့်ဝလုံလောက်စွာ ပါဝင်နေတာပါ။
ယုန်သားက အခြားသော အသားတွေထက် ပရိုတင်း ပြည့်ဝပါတယ်။ အချို့သော အစားအစာတွေကနေ ရတဲ့ ပရိုတင်းတွေက အစာမကြေတာမျိုး ဖြစ်စေပေမယ့် ယုန်သားကနေရတဲ့ ပရိုတင်းကတော့ အစာခြေစနစ်ကို အခက်အခဲ ကင်းစေပါတယ်။
ယုန်သားက အစာ​ကြေလွယ်သလို လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းကိုလည်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိစေပါတယ်။ ယုန်သား ၃၃ ဂရမ်မှာ ပရိုတင်းက ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပါဝင်နေတာပါ။
ယုန်သားက အဆီပါဝင်မှု အနည်းဆုံး အသားလို့တောင် ဆိုလို့ ရပါတယ်။ ယုန်သား ၁၀၀ ဂရမ်မှာ အဆီက ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပါဝင်တာပါ။ အဆီနည်းမှုက ကျန်းမာရေးကို တော်တော်လေး အထောက်အကူပြုပါတယ်။ အဆီပါဝင်မှု နည်းတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေသလို ကိုလက်စထရော ပမာဏကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အဆီနည်းတာကြောင့် နှလုံး ကျန်းမာစေနိုင်သလို သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
ယုန်သားမှာ ဆိုဒီယမ် ပါဝင်မှုက တော်တော်လေး နည်းပါတယ်။ ဆိုဒီ ယမ်ပါဝင်မှုများတာက ကျောက်ကပ်က အရည်ပိုတွေ စွန့်ထုတ်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေပြီး ကိုယ်တွင်းမှာ အရည်ပိုတွေ စုပုံမှုကနေတဆင့် သွေးတိုးစေဖို့ အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုန်သားက ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုနည်းပြီး ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးတိုးကျစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။
ယုန်သားက ပိုတက်ဆီယမ် ကြွယ်ဝပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်က နှလုံးစည်းချက်မှန်စေပြီး နှလုံး သွေးကြောတွေကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ် များများစားလေလေ ကိုယ်တွင်းက ဆိုဒီယမ်တွေက ဆီးအဖြစ် ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပကို စွန့်ထုတ်လေလေပါ။ ဆိုဒီယမ် နည်းတာက နှလုံး ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံးအထောက်အကူ ပြုပေးမှာပါ။
ယုန်သားမှာ ကယ်လ်ဆီယမ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် အရိုးနဲ့သွားတွေ သန်မာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ် မလုံလောက်မှုက အရိုးပွတာ၊ အရိုးပါးတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာ​ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးပါတယ်
ယုန်သားမှာ selenium ပါဝင်နေပါတယ်။ Selenium က ကိုယ်ခံအားကို မြင့်တက်စေပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ဖျက်ဆီးပေးပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ကိုယ်တွင်းမှာ selenium ပြည့်ဝနေတာက ရင်သား ကင်ဆာ၊ အဆုတ် ကင်ဆာနဲ့ ဆီးကျိတ် ကင်ဆာတွေ ခံစားရနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်၊ လို့ သိရပါတယ်။
ယုန်သားက အာဟာရ ပြည့်ဝသလို ကျန်းမာရေးကိုလည်း များစွာ အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။
Benefits of rabbit meat. reasons why you should eat rabbit meat. https://nutritionride.com/benefits-of-rabbit-meat/ Accessed Date6August 2020
What Are the Benefits of Eating Rabbit Meat? https://www.livestrong.com/article/378562-what-are-the-benefits-of-eating-rabbit-meat/ Accessed Date6August 2020
Is Rabbit Meat Healthy Compared to Common Meats? https://www.livestrong.com/article/342037-nutrition-in-rabbit-meat/?fbclid=IwAR23h3bTbMzu00Q1AkFFwpgCUpi7FI9mkKaVcu-3gGWNTA3SRZHwrXuKRrA Accessed Date6August 2020